Mailen bravo | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Izixhobo ze-Android
Isiqalisi esikhulu se-2.0 yenye yezona zilula kwaye zisebenza iziqalisi ukwandisa ukuqala kwesixhobo sethu esiphathwayo, ukufikelela kwizicelo zethu eziphambili ngokusebenzisa ii-icon kunye neewijethi ezinkulu kwaye ngaphandle kweziphumo ezicaphukisayo okanye izinto ezibonakalayo ezibengezelayo.
Into elungileyo malunga ne-Big Launcher 2.0 kukuba ibonelela ngokufikelela ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kokuhamba ngendlela edinisayo, ukuvula iinkqubo zethu eziphambili kuya kuba yinto yokuthinta nje enye kwiscreen kwaye siyabulela kuyilo lwayo olukhulu kunye nemibala, abantu abadala baya kuba nakho fumana izibonelelo ezilungileyo kwisindululo seBig Launcher.
Okokuqala, i-Big Launcher yi isiqalisi se-android Uyilungiselele indlela yakho, nangona ulandela isikhokelo sesihloko esithile. Izicelo ngaphakathi kwesindululi zenziwe zenziwe ngabadali, ukuze sikwazi ukusebenzisa iindlela ngeendlela ezimfutshane zokusebenzisa ifowuni, iwotshi, ikhalityhuleyitha okanye ikhamera, phakathi kwabanye.
Zonke izikrini ezibalulekileyo ezihanjisiweyo ziye zafunyanwa ukuze zinike ulwazi olubalulekileyo ngendlela elula nefikelelekayo. Ukusuka kwimiyalezo kunye nolawulo lweempendulo kunye noovimba beenkcukacha, kwi-ajenda kunye negalari yemifanekiso kunye nevidiyo. I-Launcher enkulu ye-2.0 yenzelwe ukuququzelela ukusetyenziswa kwefowuni, kwaye iyancitshiswa ibe sisiqalisi esisebenzayo nesikhawulezayo esivumela ukuba utshintshe ukusuka komnye uye komnye uye kumcimbi wemizuzwana kunye nee icon ezinkulu ukuze ungenzi iimpazamo kwi isixhobo sokuchukumisa.
I-Big Launcher 2.0 isebenza kwimixholo enokuguqula iiseti ze icon kunye nokufikelela ngokokuthanda kwethu. Eyona nto intle malunga nesicelo kukuba inokukhutshelwa kwiinguqulelo ezimbini ezahlukeneyo, enye isimahla kwaye enye ihlawulwe. Ngowokuqala sinokubona ukuba siyasithanda na isindululo kunye nesindululo se-Big Launcher, kwaye ukuba sifuna ukufikelela kuzo zonke iindlela, kubiza kuphela i-1 euro.
Ngemifanekiso yesindululi, abagxeki baya kuba nakho ukuyila uyilo olulula kakhulu nolusebenzayo. Big Qalisa Ayifuni ukwenza nzima kubomi ngokwezifiso, kodwa endaweni yoko sisakhelo ngokubanzi sokucwangcisa ii icon zethu esizithandayo kunye nokufikelela.
Ngaphandle kwemicimbi, inqanaba le ukwenza ngokwezifiso Inkcazo ebonakalayo ye-Big Launcher 2.0 incitshisiwe, kodwa isisisicelo esingaphezulu komtsalane kubasebenzisi abadala kunye nabo bafuna ukunqanda iingxaki xa kuziwa kulawulo lweempawu kunye nokufikelela kwiscreen esikhulu.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Apex Launcher, esona siqalisi silungileyo se-Android 4.0
Ikhonkco - I-AndroidCentral
Khuphela - Isiqalisi esikhulu se-2.0
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Isiqalisi esikhulu se-2.0, yenza ngokwezifiso i-Android yakho ngokukhululeka